Antonio Conte Oo Sheegay Inaysan Jirin Koox Ay Ka Baqeyso Chelsea Xilli Laga Yaabo Inay Champions League Ku Soo Aadaan Barcelona Ama PSG - Laacib.net
Antonio Conte Oo Sheegay Inaysan Jirin Koox Ay Ka Baqeyso Chelsea Xilli Laga Yaabo Inay Champions League Ku Soo Aadaan Barcelona Ama PSG
Tababare Antonio Conte ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin koox ay Chelsea ka baqeyso marka la qabanayo isku aadka wareega 16ka Champions League, iyadoo laga yaabo inay ku soo aadaan midkood kooxaha Baris Saint-Germain ama Barcelona.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa waxaa Champions League ka reebtay PSG labadii xilli ciyaareed ee ugu danbeysay ee ay ka qeyb qaateen tartanka. Kooxda Turkiga ee Besiktas ayaa iyadana ay macquul tahay inay isku soo aadaan wareega 16ka.
Laakiin Conte ayaa yiri: “Kooxaha naga soo horjeeda ma ahan kuwa ku farxi doona inay anaga nala ciyaaraan. Waan arki doonaa waxa dhaca.
“Waxaan xusuutaa tartanka qaramada Yurub markii aan kaalinta koowaad uga soo baxnay group-keena waxaan la ciyaarnay Spain, ka dib Jarmalka, haddii aan ka badin laheyn Germany waxaan la ciyaari laheyn France.
“Mararka qaar muhim weyn ma ahan in lagu dhameysto kaalinta koowaad ee group-ka. Waxaan u soo baxnay wareega xiga, waana qasab inaan taas ku faraxno. Ka dib qaab ciyaareed sidaan oo kale ah waa qasab inaan faraxsanahay.”
Laakiin Conte ayaa hadalkiisa raaciyay: “Marka aad u gudubto wareega xiga ee tartankaan, waa qasab inaan isku diyaariso inaad wajaheyso kooxaha ugu fiican.
“Waxaan la ciyaari karnaa Barcelona, PSG ama Besiktas, laakiin waa qasab inaan diyaar ahaano. Tartankaan waa kan ugu fiican. Waana sababta aan u dooneyno inaan meel sarre uga gaarno.”